डिप्रेसनले किन गाँज्दैछ कलाकारलाई ?
रामजी ज्ञवाली, मंसिर २५, २०७५
रंगीन छ मनोरञ्जनको यो दुनियाँ । घरबाट निस्कियो प्रशंसकहरूको भीड । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिक–टक ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही ! रंगीन दुनियाँका यी पात्रहरू हेर्दा जस्ता देखिन्छन् यथार्थमा त्यस्ता पटक्कै हुँदैनन् । यद्यपि कतिले भन्छन् कतिले भन्दैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
महेश तिमल्सिना , मंसिर २५, २०७५
यतिबेला लोक आधुनिक प्रकृतिका गीतको ट्रेन्ड चलेको गायक तथा संगीतकार राजनराज शिवाकोटी बताउँछन् । मौलिक शब्द र मेलोडीलाई नयाँ प्रविधिसँग फ्युजन गराएका कारण यस्ता गीतले दर्शकको साथ पाएको उनको बुझाइ छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर २५, २०७५
चलचित्र ‘कपुरी क’ हेर्न १६ वर्ष मूनिका बालबालिकाले अभिभावको साथमा जानु पर्ने भएको छ । देश तथा विदेशमा एकै साथ प्रदर्शनको तयारीमा रहेको यो चलचित्रले सेन्सर बोर्डबाट ‘पिजी’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा विपक्षीले काम गर्न दिएन भन्ने अनि प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने नेताहरूको बानी मन पर्दैन । पुरा पढ्नुहोस्
दयाहाङको अप्पा जेठ २४ मा
नेपाली कथानक चलचित्र ‘आप्पा’ले रिलिज डेट घोषणा गरेको छ । बाउ र छोराको कथामा आधारित चलचित्र ७६ सालको जेठ २४ मा अल नेपाल रिलिज हुने भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
क्याप्टेनको नयाा पोस्टर सार्वजनिक
चलचित्र ‘क्याप्टेन’का नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक दुई पोस्टर मध्ये एउटाका अभिनेता अनमोल केसी एक्लै फिचर्ड छन् भने अर्कोमा अनमोलसँगै सुनिल थापा र प्रशान्त ताम्राकार पनि छन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली कथानक चलचित्र ‘साइँली’को गीत ‘नाच माया...’ सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गीत गायक हेमन्त रानाले गाएका छन् । हर्क साउदले लेखेको उक्त गीतमा सुशान्त गौतमले संगीत गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
रमाइलो कुरा के रह्यो भने कुनै बेला नङ–मासुको सम्बन्धमा रहेका मिलन र गोविन्दले उक्त सफलता एक–अर्कासँग साटेनन् । मिलनले आफ्नो स्टाटसमा निर्माता शाही मात्र होइन एवार्ड विजेता अभिनेत्री जसीता गुरुङको समेत नाम बिर्सिए । पुरा पढ्नुहोस्
प्रियंकाको विवाहमा होटल खर्च कति ?
एजेन्सी, मंसिर २५, २०७५
प्रियंका र निकको विवाह जोधपुरस्थित उमेद भवन प्यालेसमा भएको थियो जसका लागि होटल र आसपासका क्षेत्र थ्रिडी बत्तीले चिरिच्याँट्ट पारिएको थियो भने ६४ वटा आलिसान कोठा एक रातको प्रतिकोठा ८० हजारमा बुक गरिएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्